Soo dejisan Virtual CloneDrive 5.5 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariGubasho CD & DVDVirtual CloneDrive
Bogga rasmiga ah: Virtual CloneDrive
CloneDrive Virtual – software ah in ay ku daydaan CD iyo DVD ku drives indhaha. software The abuuraa drive a dalwaddii meesha images disk la si toos ah u soo bixi karaa. Virtual CloneDrive kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan tirada loo baahan yahay ee drives dalwaddii la taageero oo ka mid ah qaababka caanka ah ee images disk. software waa kara inuu wax badbaadiyo taariikhda drives dhawaan Jaha, unmount drive intii uu soosaaray oo xafidi aqbasho ama wax soo saarka. Virtual CloneDrive leedahay interface ah dareen leh oo gubtay, khayraadka nidaamka yar.
Taageerada qaabab caanka ah ee images disk
Xaasidnimo ah CD, DVD iyo Blu-ray
Taageerada dersin of drives dalwaddii isku mar
Lacag taariikhda images dhawaan Jaha
Soo dejisan Virtual CloneDrive
Faallo ku saabsan Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive Xirfadaha la xiriira